CAYAARAHA DIBADA | Bakool.net | Page 2
Home / CAYAARAHA DIBADA (page 2)
Muxuu macalin Pep ka yiri isku aadka wareega 8aad ee UCL iyo iney la cayaari doonaan kooxda Tottenham.
Duhurnimadii maanta waxaa lasoo saaray isku aadka wareega sideedaad ee tartanka Horyaalada yurub kaasoo ahaa mid xiiso leh waxaana kasoo baxay kulamo waaweyn oo uu kamid yahay kulanka Manchester City la cayaari doonto kooxda Tottenham. Hadaba macalinka kooxda kubadda cagta ee Mancheser City ayaa ka hadlay aragtidiisa ku aadan kulankaas asigoona sheegay inuu yahay kulan adag isla markaasina labada kooxba ...
Muxuu macalin Klopp ka yiri in isku aad sahlan heleyn isla markaasna Porto ku aadeen?
Macalinka kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa ka hadlay sida uu u arko in wareega 8aad ee tartanka Horyaalada yurub la cayaari doonaan kooxda FC Porto. Klopp ayaa yiri; “Maxaan ka dhihi karaa? Iyagu waa Porto horayna waan ula cayaarnay, waana ognahay sida nalaga rabo inaan ahaano, sanadkii hore waayo natiijada waxay aheyd mid layaab leh, waxayna aheyd mid anaga noo ...
Muxuu macalinka kooxda Manchester United ka yiri isku aadka wareega 8aad ee UCL iyo iney Barcelona ku dhaceen?
Macalinka kooxda Manchester United ayaa aragtidiisa ka dhiibtay kadib markii ay kooxdiisa qori tuurka UCL ku dhaceen kooxda Barcelona. Solskjear ayaa yiri; “Waxaan dooneynaa kulamada ceynkaan oo kale iyo kooxaha waaweyn, Barcelona horay ayaan ula cayaarnay 2009kii 2011dii iyo afar dhamaadkii 2008dii markii uu Paul Scholes dhaliyay goolka guusha, jamaahiirteena iyo naadigeenaba waxay jecelyihiin kulamadaan oo kale”. Ole ayaa sidoo ...
Sidee ku dhacday in Manchester United ku cayaarto Old Trafford lugta hore iyadoo waliba qori tuurka sheegay iney Away ku cayaari doonto?
Waxaa maanta lasoo saaray isku aadka wareega 8aad ilaa iyo Finalka Tartanka UCL waxaana kasoo baxay kulamo adag oo ay kamid yihiin sida United V Barce iyo Spurs v City. Hadaba Dadka qaar ayaa is weydiinaya maxaa loo badalay Lugta koowad in laga dhigo Camp madama isku aadka markii la sameenayey magaca Barca oo soo horeeyey sharci ahaana kooxdii oo ...
DAG-DAG; Barcelona v Manchester United, Tottenham v Man City iyo Isku aadka Uefa Champions League oo lasoo saaray.
Waxaa daqiiqad kahor lasoo saaray isku aadka koobka ugu xiisaha iyo xamaasada badan qaarada yuru ee UEFA CHAMPIONS LEAGUE wareegiisa 8aad. Waxaa xusid mudan in sanadkaan markii ugu horeysay uu ay wareega 8aad isla imaadeen 4 koox ee EPL ka socoto tan iyo 2009kii. Kooxahaha Liverpool, Barcelona, Juventus, Manchester United, Tottenham, FC Porto, Ajax iyo Manchester City ayaa isugu yimid ...
Maxaad ugu Baahan tahay inaad ka ogaato isku aadka Quatra finalka champions league !?
Duhrunimada maalinta beri Saacada Marka ay tahay 14: 00 duhurnimo Xilliga Africada bari wadanka dhaca galbeedka qaarada Europe ee Switzerland xaruntiisa Hay’adda ugu saraysa kubadda cagta Europe ee Uefa magaaldiisa Nyon waxaa uu marti gelin doonaa mid ka mid maalmaha ugu waynaa dunida kubada cagta xilli isku aadka Uefa Champions League Quatra finalkiisa lagu wada balan san yahay. Waxaana Loo ...
Bernardo Silva oo ka jawaab celiyay in Cristiano Ronaldo ay isku arkaan wareega 8-aad Champion-ka
Kubad sameeyaha kooxda Man City Bernardo Silva ayaa wax laga weydiiyay isku aadka Champion-ka wareega 8-aad oo berito la sameenayo ayadoo City ogaan doonto kooxda ay ku aadi doonto. Haddaba Silva waxaa wax laga weydiiyay inuu jeclaan lahaa in kooxdiisa Man City lagu aadiyo Juventus oo uu hogaamiye u yahay Cristiano Ronaldo kaasi oo sedexleey caan ah todobaadkan ka dhaliyay ...
Crisitano Ronaldo Oo Saddexley Goolal Ah Dhulka Ku Jiiday Atletico Madrid, Juventus Oo Iska Xaadirisay Siddeed Dhamaadka UCL Iyo Ronaldo Oo Sababtii Loo Soo Iibsaday Ka Soo Baxay.
Juventus ayaa si cajiib ah ugu soo baxday siddeed dhamaadka UEFA Champions League kadib markii ay dhinaca kale u dhigtay natiijadii ay guuldarada kagala soo laabtay Atletico Madrid. Cristiano Ronaldo ayaa saamayntiisa la soo baxay wuxuuna saddexley goolal ah dhulka ku jiiday Atletico Madrid. Cristiano Ronaldo ayaa saddexda gool ee ay Juventus kulankan ka dhalisay waxa uu laba ka mid ...
Virgil van Dijk oo kahor kulanka Bayern Munich saaxiibadiisa Liverpool ku booriyay in qaab ciyaareedkooda kor u qaadaan kulamada ay dibada ku cayaaraan.
Daafaca kooxda kubadda cagta Liverpool Virgil van Dijka ayaa saaxiibadiisa ay isku kooxda yihiin u sheegay in qaab cayaareedkooda kulamada Awayga ay yihiin kor u qaadaan iyadoo xusid mudantahay in Liverpool habeen dambe marti u noqon doonto kooxda Bayern Munich. Van Dijk ayaa saaxiibadiisa kaga digay halista kooxda Bayern Munich oo gurigeeda joogto wuxuuna yiri mar uu saxaafada la hadlaayay; ...
Real Madrid labada kubad sameeye EPL ugu tayada wanaagsan ayay soo qaadan doontaa
12/03/2019	Leave a comment
Kooxda Real Madrid waxaa macalin looga dhigay Zidane oo dib ugu soo laabtay hogaanka Bernabue 10-bilood kadib asigoo laga rabo kooxdan inuu dib u dhis xoogan ku sameeyo waxaana la siin doonaa 300m oo pound inuu xagaagan ku suuq galo. Haddaba shabakada Independent ayaa ogaatay in Real Madrid xagaagan soo qaadan doonto labada kubad sameeyee Premier League ugu tayada wanaagsan ...